'Ọjọọ Ọjọọ Bilie' Amalite Mmepụta na Ekekọrịta Cool Photo - iHorror
Mbido Akụkọ Ntụrụndụ ụjọ 'Ọjọọ Ọjọọ Bilie' Amalite Mmepụta na Ekekọrịta Cool Photo
'Ọjọọ Ọjọọ Bilie' Amalite Mmepụta na Ekekọrịta Cool Photo
by Trey Hilburn III June 8, 2021 1,897 echiche
Ana m ekwu ya oge na oge. Ọzọ Evil dead ozi oma bu ozi oma. Ọhụrụ ozi kacha ọhụrụ si na nwụrụ kampu bụ na Ọjọọ Nwụrụ Anwụ Bilie amalitela mmepụta… taa. Kpọọ!
Na mbu ekwere na ịmalite imepụta emechara afọ a, ọ bụ nnukwu ihe ịtụnanya mara mma ịhụ onye nduzi Lee Cronin biputere foto dị mma site na Twitter na-egosi mmalite nke mmepụta na Ọjọọ Nwụrụ Anwụ Rise. Bruce Campbell na Sam Raimi nọ na ndị na-emepụta ihe n'otu isiakwụkwọ a; nke ahụ ga - ahụ ndị nwụrụ anwụ na - abanye n'ime obodo mepere emepe wee hapụ oke osisi na ụlọ ahụ.
N'ihi na oge na-adịghị ọtụtụ ihe a maara banyere ebe ke Evil dead usoro iheomume ebili ga-dabara. Iji maa atụ, ọ ga - abụ usoro iheomume mbụ nke Bruce Campbell - ọpụpụ Ashley Williams ma ọ bụ na ọ nwere ike isi na reboot pụọ Ma ọ bụ ma eleghị anya, ọ ga-abụ prequel niile ọnụ? Otu ihe doro anya, karịa Evil dead dị mma.
Ma Lilly Sullivan na Alyssa Sutherland ga-abanye na ya Ọjọọ Nwụrụ Anwụ Bilie na anyị bụ ndị mara mma dang obi ụtọ banyere nke ahụ dị ka nke ọma. Lee Cronin onye nduzi Nbanye na ala, na-elezi anya ndị nwụrụ anwụ. Mgbe ọ hụrụ Oghere n'ime Ala anyị na-enye olileanya. Fim ndị ahụ dị nnọọ iche. Tụle pọnk pacing nke Evil dead ihe nkiri na ngwa ngwa karịa ọkụ na ọkụ ọkụ nke Nbanye na ala. Ọ ga-adọrọ mmasị ịhụ otú o si ewere ihe mmụta dị na ya. Dị ka anyị niile, Cronin bụ onye na-akwado aha, yabụ ejiri m n'aka na ọ ga-eme ike ya iji nye anyị ezigbo Evil dead film.
Kedu ihe unu chere banyere akụkọ mmepụta ihe dị mma na foto maka Ọjọọ Nwụrụ Anwụ Bilie? Mee ka anyi mara na ngalaba a.
Ụbọchị 1. #EvilDeadRise pic.twitter.com/bWNpC8Ex3b
--LeeCronin (@ogechi_chukwu) June 6, 2021
Rob Zombie ekwenyela na ya Mun Munyere Universal. Gụkwuo ebe a.